नेपाल – भूकम्प आएको बेला | Amnesty International Nepal | Blog
त्यो रात मैले खेतमै बिताएँ । मैले एउटा अस्थायी छाप्रो बनाएँ । खेतभरी हामी धेरै जना थियौं । हामीले त्यहीँ पकाउने र खाने काम गर्यौं । यसरी नै एक वर्ष बितेको छ । अब घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तर मैले त्यति दुःख गरेर बनाएको त्यो माटोकोले बनाको घर फेरी कसरी बनाउने ? अब मसँग कुनै आय स्रोत छैन । सरकारले पैसा दिने भनेको छ, तर त्यो आउला भन्ने आशा पनि मर्दै गयो ।
ओत लाग्ने कुनै ठाउँ छैन
भूकम्पले मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ । म आफँै पनि खेती किसान गर्थेें र अरुको लागि पनि मजदुरी गर्दथें । तर अब कसको लागि मजदुरी गर्नु ? सबैजनाको अवस्था उस्तै छ । मानिसहरू “काम गर्न आऊ भन्छन्” र उनीहरूले सकेको दिउँसोको खाना दिन्छन् तर बेलुका खान केही छैन, मानिससँग दिने पैसा पनि छैन । उनीहरूले ज्याला दिने पैसा पनि कहाँबाट ल्याउन् ?
गाउँको समस्या पनि यही नै हो । सबैकुरा अस्तव्यस्त छ । सरकारले केही निर्माणको काम गर्ला भन्ने आशा थियो । तर ती सबै आशा अब मरिसकेका छन् । सरकारले दिने, दिने भनिरहन्छ, तर दिने भनेको कहिले हो, कहिले ? अब पानी पर्ने मौसम नजिक आइरहेको छ, र हाम्रो यो अस्थायी छाप्रोलाई पनि उडाएर लैजानेछ । हेर्नु त, यी पालमा पनि प्वाल परिसकेको छ । र वैशाख १२ मा आएको भूकम्पमा जस्तै हामीसँग फेरि पनि केही बाँकी हुनेछैन ।
दिनभरी काम गरेपछि बेलुका बस्ने ठाउँ त चाहियो नि हामीलाई । चराहरू पनि दिनभरी उडेर बेलुका आफ्नो दुलामा आराम गर्न पस्छन् । हामी पनि त त्यस्तै हो ः दिनभरी काम गरेर फर्कन्छौं, दुई चार पैसा कमाएर आउँछौं, हामीलाई पनि आराम गर्ने ठाउँ चाहियो । तर हामीसँग छानो छैन । हाम्रो सबै चिन्ता अहिले घरकै रहेको छ ।
मेरो श्रीमती सिमरास्थित छोरीको घरमा बस्न गएकी छिन्, र म एक्लै यही भत्केको घरमा सुत्छु । मेरा छोराहरू छुट्टिसकेका छन् । बेलुका मेरो छोरा र बुहारी मेरा लागि खाना लिएर आउँछन् ।
मैले घर बनाउने सोचेको त छु तर पुरानो घरको ढुंगा माटो कहाँ थन्काउने थाहा छैन । सरकारले दिने भनेको पैसा पनि आएको छैन । मसँग त चिया खाने पैसा पनि छैन ।
अब सरकारलाई पनि के भनुँ ! विद्यालयका भवनहरू अझै भत्केकै अवस्थामा छन्, देवस्थल पनि त्यसरी नै भत्केको छ । गरिबलाई दिन्छु नभन्नु भन्ने एउटा पुरानो भनाई छ । तर सरकारले भने त्यही गरिरहेको छ ।
केही समय अघि भूकम्प आएको थियो । मेरो दाजु र छोराले, “भूकम्प आयो, बाहिर जाउँ, बाहिर जाउँ” भने । मैले सोचें, “म बाँचे भने पनि के देख्छु र? मसँग खान के बाँकी होला र? यही लथालिङ्ग अवस्था त बाँकी होला हेर्न। ” मैले विचार गरेँ, “यदि म मरेँ भने मर्छु” र घर छोडेर बाहिर गइन ।
नेपालमा वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको एक बर्ष पछि पनि बहुसङ्ख्यक भूकम्प प्रभावितहरू अझै पनि अस्थायी शिविर र छाप्रोमा बस्न बाध्य छन् । सुस्त गतिको पुनर्निर्माणका फलस्वरुप उनीहरूलाई पर्याप्त आवासको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । सरकारले प्रस्तावित गरेको घर निर्माण विधि ज्यादै खर्चिलो छ: भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा लाग्ने खर्च पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गरिएको नगद सहयोग भन्दा धेरै बढी छ । आर्थिक रुपमा धान्न सकिने पक्ष पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा मुख्य पक्ष हो ।
भूकम्पको एक बर्ष पछि नेपालका भूकम्प प्रभावितहरूको दयनीय वास्तविकतामाथि प्रकाश पार्न ओमबहादुरको कथा प्रचारप्रसार गर्नुहोस् ।
← Home Truth नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूका शोषणः आदिनाथको कथा →